I-China Metal coil drapey yefektri kunye nabaxhasi | Imitya ye-Gepair
I-Metil coil drapery
Olu hlobo lwentambo yekhethini yentsimbi enje ngefown ye-link yokudibanisa, idityaniswe ziingcingo ezininzi ze-wavy, ubude bentsimbi bubude bekhethini, kwaye sinokwenza kuyo nakuphi na ububanzi obufunayo.
Ukuchazwa kweMetal Coild Mesh
Isixhobo Al, Al Alloy, SS304,316
Dia Wia I-1,0mm, i-1,2mm, i-1.5mm, i-1.6mm, kunye ne-2.0mm
Ukufakwa kwe-Mesh 3x3-10x10mm
Ukulandela umkhondo Umgangatho kunye noQingqiweyo
Unyango oluphezulu Isitshizi-peyinti
Umbala Isicelo somthengi
Izibonelelo Inamandla angenamandla, amandla aphezulu, omeleleyo
Ukusetyenziswa Unyango lwewindows, igumbi lokuhlambela, amakhethini eshawari
Amanqaku e-Metal Coild Mesh
Ubunzima bokukhanya okuhlala ixesha elide kunye nokuhlala ixesha elide
I-Flexible-iiContrakthi kunye noKwandiswa kulwaluko olunye
Isiko -Yiqulunqwe kwiiNkcazo zoBukhulu bakho
Izixhobo ze-Metal Coild Mesh
I-Metal coil drapery, i-alminum chain link mesh, ingafakelwa kwisilingi kunye ne-aluminium alloy track kunye ne-pulley nge-chain, umkhondo unokumiliselwa kudonga lophahla, i-pulley inokwenza i-drapery yesinyithi ihambe ngokulula kwaye ityathanga linokulawula i-pulley . Ngokwesiqhelo ilaphu lethu lesinyithi elinexabiso elizihombileyo linamaxesha ayi-1.5 okanye ama-2 ngaphezulu, xa i-mesh ixhonywa, inokuboniswa kwimilo ye-wave kwaye yenze ikhethini lihle.
I-coil drapery yecimbi iyakusetyenziswa njengamakhethini, sinokubonelela ngezinto zakho zesinyithi. Siza kufaka i-roller kwicala elinye lamakhethini esinyithi, xa ufumene iimpahla, faka kuphela umkhondo kwisilingi, indlela yokufaka ilula kakhulu.
Ngokuphathelele umkhondo, sineentlobo ezimbini zeetreyithi, luhlobo olunye oluthe ngqo, ipleyiti kuphela ezinokususwa ngqo; enye ithrekhi egobile, umkhondo ogobile; umkhondo unokugoba nakuwuphi na ubume ngokwendlela eyakhiwe ngayo.
Unyango lwe-Metal Coild Mesh Surface
Sineendlela ezintathu eziphambili zonyango lomphezulu, ngokombala olufunayo kunye nefuthe olifunayo.
1. Ukuthathwa kweasidi
Olu hlobo lonyango lolona lulula kakhulu. Umsebenzi wayo ophambili kukucoca ungqimba lwe-oxide, kwaye ikhethini lesinyithi ngolu hlobo lonyango, umbala uya kuba mhlophe
2. I-oxidation ye-Anodic
Le yinkimbinkimbi encinci; Le isebenza ukuphucula ubungqangi kunye nepropathi enomqobo yokuchasana ne-alloy. Le inokuyifaka umbala ikhethini lesinyithi, kunye nentengiso
ikhethini lesinyithi lihlala ixesha elide kwaye lihle
3. Ukugqiba kokubhaka (Le yeyona ndawo ithandwayo)
Olu hlobo lolona hlobo lulula lokufakelwa umbala kwikhethini yentsimbi, kukupeyinta nje ukudibanisa ubeke ikhethini kwindawo yentsimbi yokwenza umbala.
Isicelo se-Metal Coild Mesh
I-Metil coil drapery ilolwe ngocingo oluphezulu olungenazitayile, ucingo lwe-aluminium alloy, ucingo lobhedu, ucingo lobhedu okanye ezinye izinto zodongwe. Yizixhobo ezintsha zokuhombisa kulwakhiwo lwale mihla kwaye zisetyenziswa ngokubanzi njengamakhethini endlwini, izikrini zeholo yokutyela, ukuhlala yodwa kwiihotele, umhlobiso wophahla, umhlobiso kumboniso wentengiso ofanelekileyo kunye nokukhuselwa kwelanga okulusizi, njl.
Edlulileyo: Intambo yentsimbi engenasici
Okulandelayo: Ilaphu lesinyithi
Z eyakhiwe yantsimbi yeflethi yentsimbi ye-mesh co ...
I-aluminium chain hook mesh